[Deg Deg] Gabadhii Jarmalka Ahayd Ee Muqdisho Lagu Afduubay Oo La Shaaciyey Raggii Afduubay
Thursday 3rd May 2018 14:35:58 in Wararka by Xafiiska Dhexe
Dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay magaca shakhsiga ka dambeeya afduubka gabadh kalkaaliso caafimaad ah oo u dhalatay Jarmalka, una shaqaynaysay hay'adda laanqayrta cas ee caalamiga ICRC, taasoo lagu afduubay xalay magaalada Muqdisho.
Afhayeenka wasaaradda amniga, C/casiis Cali Ibraahim (Xildhibaan) ayaa magacaabay ilaalada xarunta ICRC oo uu sheegay in uu hogaaminayey nin uu magaciisa ku sheegay Maxamuud Maxamed Calas oo uu sheegay inuu ka mid yahay ilaalada xarunta.
Wuxuu intaa ku daray in ciidanka amaanka ay xabsiga u dhaadhiciyeen ilaaladii xarunta ku sugnayd wakhtigii uu dhacay afduubka.
Ilaa hadda lama oga meel lala aaday iyo xaaladda ay ku sugan tahay gabadhaas la afduubtay.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Jarmalka ayaa isna sheegay in dawladdiisu ay ka war hayso afduubka gabadhaas kaalkaalisada ah.
Lanqayrta cas ee caalamiga ayaa iyana barteeda Internetka soo dhigtay qoraal kaga walaacsan tahay badqabka gabadhaas, waxayna intaa ku dareen in ay xidhiidh kala leeyihiin maamullada qaarkood sidii loo sii deyn lahaa.
Afduubkan ayaa ku soo beegmaya ayadoo laba maalmood ka hor ka hor suuqa Bakaaraha lagu dilay gabadh u shaqayn jirtay hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO.